Chernihiv kaZwelonke Technological University - ingenye izikhungo ezinkulu imfundo ephakeme hhayi kuphela esifundeni kodwa futhi kulesi silinganiso Ukraine. Ngokuyinhloko inyuvesi uqhuba ukuqeqeshwa kwamakhono ezihlobene ubunjiniyela kanye ezezimali.
Chernihiv idolobha - iyona sokuqondisa esifundeni, ngakho kule abafundi University kusukela sonke isifunda. Kulesi sihloko, sizokutshela ngomlando CHNTU neminyango ezisebenza kanye nezinye amaqiniso ethakazelisayo eyunivesithi.
Le nyuvesi waqala imisebenzi yayo 60s kwekhulu elidlule. Futhi ekuqaleni kwakungemnandi jikelele ubuhlakani lobuchwepheshe ukuthi wawuyingxenye Kiev Polytechnic Institute, kodwa kwaba kuwo umuzi Chernihiv ekhaya.
On the Yiqiniso kuqala ezikude 1960 wathola abafundi 175 nothisha babengekho engaphezu kwamashumi amabili. Isikhundla jikelele lobuchwepheshe ubuhlakani dean kwakungekaNkulunkulu Evgeniyu Grigorevichu eliphezulu.
Ukukhiqizwa izindawo esifundeni imisebenzi Kiev Polytechnic Institute nomthelela ukudalwa emakilasini futhi izindawo laboratory okudingekayo ukuze afeze ukuqeqeshwa ngokugcwele. Faculty isakhiwo labelwe Governor House. Lesi sakhiwo kubhekwa somlando, endaweni salo ayizinkulungwane 1.5 square metres. Ngaleso sikhathi saqala ukwakha isakhiwo esisha esikoleni futhi yokuhlala umfundi.
Ukusakaza lokuqala esigcwele ezindaweni ezintathu zase ukubuthwa 1962 kuya 1963, inani labafundi safinyelela 150. Ngo-1965, ngokuhambisana Order Inkonzo ihlelwe legatsha KPI e Chernigov, okuyinto ngokomthetho lalinabashumayeli neminyango emithathu: jikelele lobuchwepheshe, kwezobuchwepheshe kanye lokukhanda. Isikhundla Umqondisi futhi ithole eliphezulu E. G. Kakade kusukela 1966 kuya ku-1967 igatsha abaqeqeshiwe abafundi engaphezu kwenkulungwane.
Chernihiv Technological Institute yasungulwa kuphela ngo-1991, ngokusho isimemezelo ezikhonzayo. Iposi ka li wayala u-Alexander Ivanovich Denisov. Ngo izindonga zawo Institute ngawo lowo nyaka wathola abafundi mayelana 500, futhi esikhathini kusuka ngo-1991 kuya 1992 - abantu mayelana 2000.
1994 kwaba yisikhathi soshintsho ihlangano. Ukuphumelela zemfundo ephakeme wayebe nzima ngenxa isimo eziyinkimbinkimbi yezimali sokushintshela ngemva kokuwa wase-USSR futhi kumiswa geqe Ukraine. Kwase wanquma ukusungula Faculty of Engineering kanye nezomnotho. 1994 kwaba yisikhathi soshintsho enyuvesi ukuze lapho efika ilayisensi kanye nokwenziwa kube semthethweni (kude isikhungo has ezingeni 4th sokugunyazwa).
Julayi izinsuku 1999 baletha kulesakhiwo isimo esisha, okungukuthi Chernihiv State Technological University. Kamuva, ngemva kokunyamalala zeminyaka nambili, yena waba nomunye inyuvesi. Kwakuwusuku Institute of Law and Social Technologies of Chernigov idolobha (eminyakeni embalwa kamuva, ngo-2014 waba uqambe Scientific-Research Institute of Law and Social Technologies).
inyuvesi kaZwelonke waqala kuphela ngo-2013 Ngakho, kuze kube manje, igama lakhe kanje: Chernihiv kaZwelonke Technological University (CHNTU). Ngo-2014 yena Ujoyinwe Institute of Economics and Management, kanti isakhiwo lesikhungo kushintshile futhi.
Chernihiv National University of Technology inikeza abafundi ukuqeqeshwa kuwo wonke amazinga emfundo ekhona njengamanje - impohlo, onguchwepheshe, okuyinhloko. Le nyuvesi has amakhono amane ezahlukene kanye nezindawo, ebandakanya iziqu.
namazinga amazwe omhlaba
Eyabelwe University isitifiketi ukuphathwa izinga uhlelo kumiswa ngokuvumelana esiku international ejwayelekile ISO9001. Lesi sikhungo semfundo ephakeme iyilungu elishisekayo izinhlangano eziningana zezemfundo. Lezi zihlanganisa i-Association of amanyuvesi yomsebenzi CIS, kanye ne-International Association of amanyuvesi Slavic.
Isakhiwo semfundo ephakeme inemibuzo eyisishiyagalolunye amandla, okuhlanganisa amane nesikhombisa neminyango ahlukahlukene. Kukhona isikhungo ukuqeqeshwa postgraduate ithuba lokuya graduate noma izifundo zobudokotela. Inyuvesi ifakwe ezinhle yesayensi umtapo, abahleli kanye nabashicileli. Ngaphezu kwalokho, isakhiwo inyuvesi ihlanganisa amakolishi kwezomnotho kanye ezokuthutha. Inani labafundi ngosuku futhi ukubhalelana amafomu ukuqeqeshwa ifinyelela ayizinkulungwane eziyishumi. Le nyuvesi bangathola okukhethekile emnyangweni wezempi.
CHNTU bagcina eziningi zemfundo ephakeme, amalungu e-Academy of Technology yezwe, inani elikhulu odokotela kanye noprofesa. Ngemva kokuthweswa iziqu, abafundi izuzwe phezulu kakhulu emsebenzini wakhe. Ngokwesibonelo, kufanele ibhaliswe njengendlalifa engumqondisi noma unjiniyela omkhulu ezindaweni zezimboni, ukuphathwa izikhungo yesayensi, et al., Yikuphi lihlotshaniswa svyaano kanye nokuphatha umphakathi.
Chernihiv National University of Technology siqukethe 16 izakhiwo yokufundisa, ukuqeqeshwa, futhi isayithi ukukhiqizwa, isikhungo kwamasiko, a workshop ambalwa namahositela umfundi, canteens futhi yezemidlalo, okuyinto yakhelwe izivakashi ezingaphezu kuka-100. Muva nje, ukwakhiwa ilungele ukwamukela abafundi abakhetha bacitsa sikhatsi imidlalo Igumbi, sauna noma yokubhukuda, nokunye. N.
Umuzi university of Chernigov sasivumela esebenza nge-computer, ngoba ifakwe ngaphezu 800 PC, okuyizinto ngamashumi ayisihlanu zokufundela kanye amakamelo laboratory.
Le nyuvesi kufakwe ohlwini isimo irejista amagugu abamemezeli. Chernigov University of Technology njalo kudedela uyakufanelekela izincwadi zesayensi. Esikhathini wendawo umtapo Isikhwama wabonisa amakhophi mayelana 570.000 yencwadi. Kuhlanganisa cindezela neyesiNorway encane. Ngokuvamile, umtapo kungaba kanyekanye usebenza cishe 600 abantu.
Njalo ngonyaka CHNTU labetibambile Engqungqutheleni yesayensi sendawo nge ukuchema kuzo lobuchwepheshe, okwakuhilela eziningi hhayi kuphela oprofesa nabafundi iziqu, kodwa futhi abafundi. I-Scientific Council kanye nokuphathwa inyuvesi okukhuthaza imikhuba enjalo kakhulu.
Ngo CHNTU kukhona amandla eziningana ezihlukahlukene, maphakathi ne ikhono ukuthola imfundo eziqu. Wonke umuntu angaba bathuthukise amakhono abo. Yiziphi amandla eyunivesithi khona futhi yini ngokucacile zabo? Ngo CHNTU amayunithi hhayi eziningi, kodwa ihlelwe seFundo onolwazi ukuthi iyakwazi ukuthuthukisa izinga lemfundo kuleli isikhungo.
Ezezimali kanye uMnyango Economics inikeza ukufundisa abafundi ezimalini, yasebhange nokuvikeleka eziyisisekelo izimiso; ukuphathwa noma ukuphathwa zokuphepha emkhakheni ezezimali kanye nakwezomnotho. Le yunithi, okugxile eyala ethize.
NobuNjiniyera uMnyango usinikeza ukuqeqeshwa lwabakhi futhi onjiniyela civil (ubunjiniyela wokubacindezela, isibonelo), kanye abangochwepheshe emkhakheni we geodesy futhi ezihlobene nokuphathwa kokusetshenziswa komhlaba ubuchwepheshe. Namuhla endaweni ngempela ethembisa.
Faculty Wezenhlalakahle futhi ulungisa ochwepheshe kulo mkhakha - abafundile osonhlalakahle abazokwazi ukuthandana yini nalokho athi uyakukholelwa, futhi bakusebenzise ngokwabo emakethe yezabasebenzi esifundeni.
Njengoba kushiwo ngenhla, i-National Technological University kwedolobha Chernigov baqeqeshiwe emkhakheni ezempi, kanye nokuthuthukiswa kwamakhono kwelinye izindawo kungenziwa accredited.
Ngokuzimela ukulungiselela abafundi yokwamukelwa eyunivesithi kunzima. CHNTU inikeza amasevisi zayo, ngokusebenzisa imisebenzi isikhungo abafanele. Lesi sakamuva kufakwe kule nokwakheka eyunivesithi. Maphakathi ungabhalisela sokuqeqesha izifundo kusihlwa noma ngeMigqibelo, futhi uphinde uthole inguqulo ye-ukuvakashelwa masonto onke.
Inqubo ukulungiselela nokuyala okusezingeni eliphezulu izivivinyo esikoleni futhi emnyango labetibambile ezingeni eliphezulu, ngenxa khona ochwepheshe abaneziqu kakhulu. Ngokwesibonelo, abafundi engathuthukisa oluphelele kanye ngokuphelele indlela ekutadisheni isiyalo.
Ngokusho idatha yakamuva, inani labafundi ifinyelela abantu kungathi izinkulungwane 7. I-Scientific Council yakhiwa othisha kuka-500 (babo cishe 270 - PhD kanye 37 - osolwazi noma zobudokotela).
Kuyini IQ umuntu ovamile?
Uyini peptides natriuretic?
"Alchemy ephepheni": zokupheka. "Alchemy ephepheni" (Doodle Alchemy): amathiphu